ငှက်ပျောသီးစားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ – ADS Myanmar Blog
ငှက်ပျောသီးကို နေ့စဉ်စားသုံးခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေရုံသာမက အသားအရေကိုလည်း လှပစေပါသည်။ ငှက်ပျောသီးစားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေတယ်။
အဝလွန်နေသူများအတွက် ငှက်ပျောသီးဟာ အကောင်းဆုံးပိန်ဆေးပါ။ ငှက်ပျောသီးသည် အစားအစာများကို အစာအိမ်ထဲသို့ ကြာရှည်စေရန် ထိန်းသိမ်းထားလေ့ရှိပြီး ဗိုက်ပြည့်သည်ဟု ထင်မှတ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဝလွန်သူများအတွက် ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးကို နေ့လည်စာမစားခင်တွင် ပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးတွင် အမျှင်ဓာတ် ၂.၅ဂရမ်ပါဝင်ပြီး တစ်ဝက်ခန့်မှာ အစာအိမ်မှာ မပျော်ဝင်နိုင်သောကြောင့် အူမကြီးမှတစ်ဆင့် အညစ်အကြေးများအဖြစ် သယ်ဆောင်ကာ ဝမ်းသွားစေပါတယ်။ ထို့ကြောင် ငှက်ပျောသီးစားသုံးခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လိုအပ်သော အမျှင်ဓာတ် ၁ဝရာခိုင်နှုန်းကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောကြောင့် ကျန်းမာရေးကို လွန်စွာအထောက်အကူပြုစေတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
၃။ နှလုံးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးတွင် ပါဝင်သော ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်သည် ခန္ဓာကိုယ်မှတစ်ဆင့် သွေးစီးကြောင်းထဲသို့ လှည့်ပတ်ပြီး ဆဲလ်အမြှေးပါးထဲရှိ ငွေ့ရည်များထဲတွင် ပျော်ဝင်စေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သွေးလှည့်ပတ်မှုစနစ်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေပြီး နှလုံးအားကောင်းစေပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးတွင် ပါဝင်သော ဗီတာမင်အေ (သက်စောင့်ဓာတ်) သည် မျက်လုံးအားကောင်းစေရန်အတွက် အဓိကကူညီပေးပါသည်။ ဗီတာမင်အေသည် မျက်စိအမြှေးပါးများကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး အလင်းသည် မျက်ကြည်လွှာသို့ ဝင်ရောက်ရာတွင် အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မျက်လုံးအားနည်းသူများအတွက်လည်း ငှက်ပျောသီးကို ပုံမှန်စားသုံးသင့်ပါတယ်။
၅။ ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်တယ်။
တစ်နှစ်လျင် ငှက်ပျောသီး၇၅ထက်ပိုစားသော အမျိုးသမီးများသည် ကျောက်ကပ်ကင်ဆာဖြစ်တန်စွမ်း ၄ဝရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းစေပါတယ်လို့ ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ သိရသည်။ တစ်ပတ်လျင် ငှက်ပျောသီး ၄လုံးမှ၆လုံး စားသုံးသူသည် ကျောက်ကပ်ကင်ဆာဖြစ်တန်စွမ်း ၅ဝရာခိုင်နှုန်းလျော့ကျစေပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကဲ . . . ကျန်းမာရေးလိုက်စားလိုသော Ads.com.mm ပရိသတ်ကြီးအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပပစ္စည်းများကို https://www.ads.com.mm/health–beauty-my လင့်ခ်အတိုင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ငှကျပြောသီးကို နစေ့ဉျစားသုံးခွငျးသညျ ကနျြးမာရေးကို ကောငျးမှနျစရေုံသာမက အသားအရကေိုလညျး လှပစပေါသညျ။ ငှကျပြောသီးစားသုံးခွငျးဖွငျ့ ရရှိနိုငျသော အကြိုးကြေးဇူးမြားကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ ကိုယျအလေးခြိနျ လြော့ကစြတေယျ။
အဝလှနျနသေူမြားအတှကျ ငှကျပြောသီးဟာ အကောငျးဆုံးပိနျဆေးပါ။ ငှကျပြောသီးသညျ အစားအစာမြားကို အစာအိမျထဲသို့ ကွာရှညျစရေနျ ထိနျးသိမျးထားလရှေိ့ပွီး ဗိုကျပွညျ့သညျဟု ထငျမှတျစပေါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အဝလှနျသူမြားအတှကျ ငှကျပြောသီးတဈလုံးကို နလေ့ညျစာမစားခငျတှငျ ပုံမှနျစားသုံးပေးခွငျးဖွငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျကို လြော့ကစြပေါတယျ။
ငှကျပြောသီးတဈလုံးတှငျ အမြှငျဓာတျ ၂.၅ဂရမျပါဝငျပွီး တဈဝကျခနျ့မှာ အစာအိမျမှာ မပြျောဝငျနိုငျသောကွောငျ့ အူမကွီးမှတဈဆငျ့ အညဈအကွေးမြားအဖွဈ သယျဆောငျကာ ဝမျးသှားစပေါတယျ။ ထို့ကွောငျ ငှကျပြောသီးစားသုံးခွငျးသညျ ကြှနျတျောတို့နစေ့ဉျလိုအပျသော အမြှငျဓာတျ ၁ဝရာခိုငျနှုနျးကို ထောကျပံ့ပေးနိုငျသောကွောငျ့ ကနျြးမာရေးကို လှနျစှာအထောကျအကူပွုစတေယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
၃။ နှလုံးလညျပတျမှုကို ကောငျးမှနျစပေါတယျ။
ငှကျပြောသီးတှငျ ပါဝငျသော ပိုတကျဆီယမျဓာတျသညျ ခန်ဓာကိုယျမှတဈဆငျ့ သှေးစီးကွောငျးထဲသို့ လှညျ့ပတျပွီး ဆဲလျအမွှေးပါးထဲရှိ ငှရေ့ညျမြားထဲတှငျ ပြျောဝငျစပေါတယျ။ ထို့ကွောငျ့ သှေးလှညျ့ပတျမှုစနဈကို ပိုမိုမွနျဆနျစပွေီး နှလုံးအားကောငျးစပေါတယျ။
ငှကျပြောသီးတှငျ ပါဝငျသော ဗီတာမငျအေ (သကျစောငျ့ဓာတျ) သညျ မကျြလုံးအားကောငျးစရေနျအတှကျ အဓိကကူညီပေးပါသညျ။ ဗီတာမငျအသေညျ မကျြစိအမွှေးပါးမြားကို ထောကျပံ့ပေးပွီး အလငျးသညျ မကျြကွညျလှာသို့ ဝငျရောကျရာတှငျ အကောငျးဆုံးထောကျပံ့ပေးပါတယျ။ ထို့ကွောငျ့ မကျြလုံးအားနညျးသူမြားအတှကျလညျး ငှကျပြောသီးကို ပုံမှနျစားသုံးသငျ့ပါတယျ။
၅။ ကငျဆာရောဂါကို ကာကှယျတယျ။
တဈနှဈလငျြ ငှကျပြောသီး၇၅ထကျပိုစားသော အမြိုးသမီးမြားသညျ ကြောကျကပျကငျဆာဖွဈတနျစှမျး ၄ဝရာခိုငျနှုနျး လြော့နညျးစပေါတယျလို့ ဆှီဒငျနိုငျငံရဲ့လလေ့ာမှုတဈရပျအရ သိရသညျ။ တဈပတျလငျြ ငှကျပြောသီး ၄လုံးမှ၆လုံး စားသုံးသူသညျ ကြောကျကပျကငျဆာဖွဈတနျစှမျး ၅ဝရာခိုငျနှုနျးလြော့ကစြပေါတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ကဲ . . . ကနျြးမာရေးလိုကျစားလိုသော Ads.com.mm ပရိသတျကွီးအတှကျ ကနျြးမာရေးနှငျ့အလှအပပစ်စညျးမြားကို https://www.ads.com.mm/health–beauty-my လငျ့ချအတိုငျး ဝယျယူနိုငျပါတယျ။
Author kyawsoeaungadsPosted on June 11, 2016 June 10, 2016 Categories Ads.com.mmTags Knowledge
Previous Previous post: သစ်ကုလားအုတ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Next Next post: ”လစာ ဘယ်လောက်ရပြီလဲ”